Tue, Jul 14, 2020 at 6:30am
कपाल झर्न रोक्ने र उमार्ने यी हुन घरेलु उपाय
काठमाडौं, १० साउन पहिला पहिला कपाल झरेर टाउको खुइलने समस्या बुढापाका मानिसमा मात्रै देखिने गर्दथ्यो । तर, यो समस्या किशोर किशोरीमा पनि देखिन थालेको छ । हाम्रो खानपान र जीवन शैलिका कारण कपाल झर्ने समस्या बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । आफ्नो जीवन शैलिलाई सुधार गर्न नसक्दा महिला र पुरुष दुबै टाउको खुइलने अवस्था आएको हो । कलाप झरेपछि किशोर–किशोरीहरू बुढोदेखिने भएपछि धेरैलाई चिन्ता लाग्न..
झापाको दमकमा १९ जनामा डेंगुको सङ्क्रमण
दमक, १० साउन । झापाको दमकमा १९ जनामा डेंगु सङ्क्रमण भएको पाइएको छ । यो वर्षको अहिलेसम्ममा कुल १९ जनामा डेंगु देखिएको दमक नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख इन्द्र अर्यालयले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षअघि दमकमा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु हुने गरी महामारीका रुपमा फैलिएको डेंगु यो वर्ष भने फाट्टफुट्टरुपमा मात्रै देखिएको उहाँले बताउनुभयो । दमकमा गर्मी शुरुदेखि नै डेंगुको सङ्क्रमण हुन नदिन त्यससम्बन्धी..
दम, मिर्गौला, मधुमेह र मुटु रोगी बढे
काठमाडौँ, १० साउन । नेपालमा नसर्ने रोगमध्ये सबैभन्दा बढी श्वासप्रश्वास अर्थात् दीर्घ दमरोगका बिरामी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिसय जनामा छ जना मानिस दमका रोगी देखिएका छन् भने त्यसपछि मात्र मिर्गौला, मधुमेहलगायतका रोग देखा परेको पाइएको छ । श्वासप्रश्वासपछि दीर्घ मिर्गौला रोगी, मधुमेह र मुटुरोग देखा परेको अध्ययनले देखाएको हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले तीन वर्ष लगाएर नेपालका ७२..
नसर्ने रोग लागेकाको सङ्ख्या बढ्दो
काठमाडौँ, ९ साउन बदलिँदो रहनसहन र खानपानका कारण मिर्गाैला, मुटु, श्वासप्रश्वास र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगीका सङ्ख्या बढेको एक अध्ययनले देखाएकोे छ । अस्पतालमा आएका बिरामीका सङ्ख्याका आधारमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले तीन वर्ष लगाएर सम्पन्न गरेको नसर्ने रोगसम्बन्धी अनुसन्धानले ती चार प्रकारका रोगी बढिरहेको उजागर गरेको छ । सन् २०१६ बाट शुरु भई सन् २०१८ मा ७२ जिल्लाका २० वर्षमाथिका १३ हजार..
बेलको जुसतर्फ आकर्षण : आम्दानी काईदा, स्वास्थ्यलाई फाईदा
तनहुँ, ९ साउन । वनमा खेर गइरहेको बेललाई सदुपयोग गरी बेलको जुस उत्पादन गर्न थालेपछि जुस सेवन गर्ने मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ जामुनेस्थित नमूना माउन्टेन सामुदायिक बेल जुस उद्योगले बेलको जुस उत्पादन गर्न थालेपछि यसतर्फ मानिसको आर्कषण बढ्दै गएको हो । बेलको जुस सेवनबाट ग्याष्ट्रिक, रक्तअल्पता, कब्जियतको समस्या समाधान हुने र पाचनशक्ति बढाउने, उच्चरक्तचाप, झाडापखलालगायतका विभिन्न रोगका..
विहानै खाली पेटमा मन तातो पानी पिउदा फाइदै फाइदा !
काठमाडौँ, ८ साउन पानी कुन बेला कसरी पिउने भन्नेबारे भने थुप्रै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । तिनका रिपोर्ट पनि उही र उस्तै पक्कै छैनन् । यसले मानिसमा दुविधा पैदा पनि गरिदिएको छ । तथापि, मानिसले दिनको तीन लिटरसम्म पानी पिउँदा राम्रो हुने रिपोर्टहरुको निष्कर्ष रहेको पाइन्छ । जेसुकै होस्, पानी भन्ने कुरा तिर्खा लाग्दा पिउनैपर्छ । त्यसबाहेक हरेक बिहान खाली पेटमा तातो (मनतातो)..
पिसाबको रंगबाट नै थाहा हुन्छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था
काठमाडौँ, ८ साउन शरीरमा रहेका विकारहरू निकाल्ने प्राकृतिक तरिका हो पिसाबमोचन । यसको सामान्य रंग फिक्का पहेंलो वा अलिकति गाढा पहेंलो हुनसक्छ । पिसाबको रंग हेरेर तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ फिक्का पहेंलो पिसाबको रंग फिक्का पहेंलो छ भने तपाईंको स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने संकेत हो । तपाईंको शरीरले राम्रो काम गरिरहेको छ । पहेंलो शरीरमा पानीको मात्राको कमी भयो भने पिसाबको रंग पहेंलो..
बारामा लाइफ हेल्थकेयर हस्पिटल उद्घाटन, बिरामीको समय र पैसा बचत हुने !
कलैया, ८ साउन बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–५ बरेवा दरवार अगाडि लाइफ हेल्थकेयर हस्पिटलको आज उद्घाटन गरिएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच डा आशुतोषकुमार बादलका आमा आज्ञादेवी मोदक र डाक्टर शिवेश पाण्डेयका आमा राजेश्वरीदेवी पाण्डेलले संयुक्त रुपमा सो अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उदघाटन गर्दै दुबै जनाले छोराले आफ्नै ठाउँमा बिरामीलाई सेवा दिन लागेको देख्दा खुशी व्यक्त गर्दै उज्वल भविष्यको कमनासमेत गर्नुभएको थियो । कलैयालगायत..
मनसुनमा स्वस्थ रहन यी कुरामा सावधानी अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ, ८ साउन मनसुनको बेला कतिपयलाई वर्षाको पानीमा भिज्न निकै मन पर्ने हुन्छ । तर, समस्या तब हुन्छ जब तपाईंको थोरै लापरबाहीले तपाईंलाई बिरामी बनाइदिन्छ । त्यसैले मनसुनमा हुने समस्यालाई बुझ्न र तिनको समयमै निदान कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्क हुन्छ । मनसुनमा हाइजीनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । किनकी घरको सरसफाईदेखि तपाईंको डाइटमा पनि यो मौसममा थोरै लापरवाहीले तपाईंलाई बिरामी पार्ने..
महिला कर्मचारीका लागि नगरपालिकाभित्र छुट्टै स्तनपान कक्ष
वालिङ, ६ साउन । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कार्यालयभित्र छुट्टै स्तनपान कक्ष संचालनमा ल्याएकाे छ ।नगरपालिकामा काम गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका सेवा लिन आउने महिलालाई लक्षित गरी नगरपालिकाले स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यालयमा सेवा लिन आउने महिला सेवाग्राहीले सार्वजनिक स्थलमा शिशुलाई स्तनपान गराउन लाज मान्ने गरेकाले नगरपालिकाको कार्यालयभित्रै एक अलग्गै स्तनपान कक्ष निर्माण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए..
काठमाडौँ, ५ साउन प्रायजसो व्यक्तिले बिहान उठ्ने वित्तिकै मन तातो पानी पिउने गर्छन्। कसैले मन तातो पानीमा मह वा कागती मिसाएर पिउने गर्छन् भने कसैले नुन राखेर पिउने गरेका हुन्छन्। तर बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा मन तातो पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदा नै हुन्छ। तर कमै मात्र व्यक्तिले मनतातो पानीमा बेसार राखेर पिउने गर्छन्। खासमा बेसारको फाइदाबारे जानकारी नहुँदा बेसार पानी नपिएको..
बिरामीकाे मृत्युपछि नोबेल अस्पताल तनावग्रस्त
मोरङ, ५ साउन। एक बिरामीकाे मृत्यु भएपछि विराटनगरको नोबेल अस्पताल तनावग्रस्त भएको छ । उपचारको क्रममा बिरामीको ज्यान गएपछि उक्त अस्पतालमा तनाव सृजना भएको हो। गएको बिहीबार उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ६ का अनिल कुमार साहको ज्यान गएको थियो। खुट्टामा सामान्य चोट लागेपछि अघिल्लो बिहीबार नोबेल अस्पतालमा गएका अनिललाई अस्पतालले सामान्य ब्याण्डेज गरेर औषधी दिएको र एक हप्ता..
मनसुनमा स्वस्थ रहन खानुहोस् यी ३ फल
काठमाडौँ, ५ साउन अहिलेको मौसम दिनहुँ जसो पानी पर्ने र बेला बेलामा घाम लाग्ने बनेको छ । जहाँ मनसुनले हामीलाई गर्मीबाट राहत दिलाउँछ त्यही मनसुनमा विभिन्न किसिमका रोगहरुले पनि आफ्नो बाटो बनाउने काम सुरु गर्छ । जसले गर्दा मनसुनमा अनेक प्रकारका रोगहरुको खतरा बढेर जान्छ । मनसुनमा भाइरल, सर्दी र फ्लू जस्ता संक्रामक रोगहरुले चाँडै नै आक्रमण गर्ने गर्छ । यस अवस्थामा..
काठमाडौँ, ५ साउन । सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘होल बडी चेकअप’को नाममा हजारौं रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । उनीहरूले १ हजार ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । अस्पतालपिच्छे शुल्क फरक फरक हुँदा बिरामीलाई सकस परेको छ । सरकारले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा परेको हो । ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालले सामान्य शरीर जाँच शीर्षकमा..
१ सय ८ जनाले गरे रक्तदान
भक्तपुर, ४ साउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दुवाकोट शाखाले आज आकस्मिक रुपमा आयोजना गरेको रक्तदानमा १०८ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रेडक्रसको नेतृत्वमा स्थानीय विभिन्न सङ्घसंस्थाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा ७५ पुरुष र ३३ महिलाले रक्तदान गरेको शाखाका सभापति सोम प्रधानले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा २८ ले मृत्युपर्यन्त अङ्गदान गरेको र १८ ले आँखा दान गरेको प्रधानले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी आजै महानगरीय प्रहरी परिसरले..
मेहन्दी लगाउँदा नगर्नुहोस यस्तो गल्ती, क्यान्सरसम्म हुन सक्छ
काठमाडौँ, ३ साउन मेहन्दी र हरियो चुरासाउनको सौन्दर्य सूचक हो । महिलाले साउन महिनाभरि हातमा हरिया चुरा र मेहन्दी लगाउँछन् । उसो त साउन महिना प्राकृतिक रूपमा पनि हरियो महिना नै हो । धर्म संस्कृति मान्ने महिलाहरूले लगाउने मेहन्दी र चुरा पछिल्लो समय प्राय सबै जसो महिला र युवतीको लगाउने गरेका छन् । अहिले त मेहन्दी र चुरा फेसनकै रूपमा स्थापित भएको..
झापामा कालाजारको नयाँ रोगी फेला
भद्रपुर, २ साउन झापाको मेचीनगर–१५ मा कालाजारको नयाँ रोगी फेला परेका छन् । वैभव टि–स्टेट नजिकै बसोवास गर्ने ४० वर्षीय कमलेश मर्डीमा कालाजार भेटिएको मेचीनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शशीकला राईले बताउनुभयो । मर्डीको मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा उपचार भइरहेको छ । आज जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र नगरपालिकाका कर्मचारीसहितको टोली त्यसक्षेत्रमा पुगेको थियो । संयोजक राईका अनुसार कालाजार रोग नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले कीटनाशक विषादी..
गर्मीमा टाउको किन दुख्छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय
काठमाडौँ, २ साउन तापक्रम बढ्दै जादा मानिसमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्छ । ती मध्येको एक हो टाउको दुख्नु । तर, गर्मीका कारण टाउको दुख्यो भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन । टाउकोको दुखाई सामान्य अवस्थादेखि गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । टाउको दुख्नुको मुख्य कारण : - लामो समयसम्म मोबाईल, कम्प्युटर चलाउदा, टिभी हेर्दा । - चिया, कफी, धुम्रपान, मद्यपान । - अनावश्यक तनाव । - पिनास । - चर्को..
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २ हजार
मुग्लिन, १ साउन इच्छाकाना गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०७५\_७६ मा प्रोत्साहनस्वरुप यातायात खर्चका लागि मासिक रु एक हजार ५०० उपलब्ध गराउँदै आएकामा गाउँपालिकाले आव २०७६\_७७ देखि भने रु ५०० वृद्धि गरेर मासिक रु दुई हजार दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई झोला, छाता..
बहुउपयोगी प्याज, स्वादलाई मात्र होईन सेवन गरे रोगहरु पनि 'चट्'
काठमाडौँ, ३१ असार त्यसो त हामी प्याजलाई तरकारीमा हालेर खान्छौँ जसले हाम्रो तरकारीको स्वाद मीठो बनाइदिन्छ । तर, मीठो बनाउने मात्र होइन, प्याज खानाले सानातिना धेरै रोगहरु पनि ठिक हुन्छन् । आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले कयौँ रोगहरु टाढा लैजानका लागि प्याज एकदमै फाइदाजनक हुन्छ । प्याजमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, आइरन, भिटामिनहरु हुने भएकाले यसको प्रयोग शरीरको आन्तरिक तथा बाह्य रुपका लागि राम्रो हुन्छ । प्याजको..
स्वास्थ्य सेवा सहज र सरल बनाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई उपप्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन
दमौली, ३१ असार उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवा सहज र सरल बनाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित बन्दीपुर अस्पतालको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले बिरामीले सहज रुपमा सेवा पाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “देशमा अहिले विपद्को अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो । विपद्को समयमा स्वास्थ्य संस्थाले औषधि पर्याप्त..
२८ जिल्लामा सरुवा रोगको त्रास, खाना खानअघि हात धुनसमेत समस्या
काठमाडौँ, ३१ असार । अविरल वर्षाबाट प्रभावित २८ जिल्लामा पिउने पानीको स्रोत दूषित भएका छन्। बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिसँगै सरुवा रोगको जोखिम देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग, महामारी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. प्रकाश शाहले सरुवा र किटजन्य रोगको जोखिम रहेको बताए। झाडापखाला, टाइफाइड, जन्डिस, हैजा, हेपाटाइटिसलगायत सरुवा रोगको जोखिम रहेको उनले बताए। तराईका जिल्लामा लामखुट्टेका कारण औलो, डेंगी, कालाजार, चिकनगुनियालगायत..
काठमाडौँ, २९ असार घर हाेस या बजार । जहाँ पनि लामखुट्टेले टाेकेर मानिसलाइ आजित बनाएकाे छ । लामखुट्टेकाे टाेकाइबाट जाेगिन मानिसले अनेक उपायहरू अपनाउँछन् । तर एक अध्यननले ओ पोजेटिभ रक्त समुह भएका मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने देखाएको छ । जर्नल अफ मेडिकल इन्टोमोलोजीमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार ओ पोजेटिभ भएका मानिसलाई अन्य रक्त समुह भएकाहरुको तुलनामा बढी टोक्ने गरेको बताइएको हो । रक्त..
एक सातादेखि औषधि विमानस्थलमै थन्किदाँ डोल्पाका विरामीको विचल्ली
बाँके, २८ असार । एक सातादेखि लाखौं मूल्यको औषधि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा थन्किएपछि कर्णाली प्रदेशको दुर्गम डोल्पाका विरामीको विचल्ली परेको छ । नेपालगञ्जबाट जुफालका लागि हवाई उडान अवरुद्ध भएका कारण उक्त औषधि नेपालगञ्जमै थन्किएको हो । औषधि यही थन्किएपछि अहिले डोल्पा अस्पतालमा सिटामोलको समेत अभाव देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । जुफाल विमानस्थल चार दिनदेखि नखुलेकोले नेपालगञ्जदेखि जुफाल उडान हुन नसकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रमुख..
अस्पतालको ‘शैया’मा ब्रह्मलुट
काठमाडौँ, २८ असार । सरकारी तथा निजी अस्पतालले बिरामीका लागि अत्यावश्यक बेडमा समेत चर्को शुल्क लिँदै आएका छन् । ती अस्पतालहरूले बेड शुल्कबापत २ सय रुपैयाँँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ । मनपरी शुल्क असुल्दा पनि सरकारले ती अस्पतालको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको देखिँदैन । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । सरकारी अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सामान्य..
सुगर, ब्लडप्रेशर आदीको घरेलु उपचार 'जामुनो' जसका छन् अनेकौं फाइदा (विधि सहित)
काठमाडौं, २७ असार । विशेषगरी गर्मि मौसममा आँप बाहेक अन्य केही फल समेत स्वास्थ्यका लागि लाभकारी हुन्छ । जसमध्ये एक फल हो जामुनो । जामुनो खानका लागि जति स्वादिष्ट हुन्छ त्यति नै स्वास्थ्यका दृष्टीले फाइदाजनक मानिन्छ । केही अमिलो र गुलियो यो फल विशेषगरी डायबिटीजका बिरामीका लागि बरदान नै मानिन्छ । जामुनोका अनेक फाइदा त्यसमा रहेको एन्टीक्सीडेन्ट, एन्टीबैक्टीरियल तथा एन्टी क्यान्सर गुणले भरपूर..
चुरोट भन्दा खतरनाक हुन्छ अगरबत्ती धूपको धुँवा !
एजेन्सी, २६ असार धार्मिक कार्यमा होस् वा सांस्कृतिक कार्यमा होस् जताततै अगरबत्ती आवश्यक्ता परेकै हुन्छ। धार्मिक कार्य तथा पूजापाठमा आवश्यक पर्ने अगरबत्तीको वषौँदेखि प्रयोग गर्दै आइएको छ। अधिकांश मानिसहरु पूजापाठको समयमा मात्र नभएर बिहान र बेलुका नियमित रुपमा पनि अगरबत्ती बाल्ने गरेको समेत पाइन्छ। प्रायः जसो पसलहरुमा बिहानमा अगरबत्ती बाल्ने गरेको देखिन्छ। तर धेरैलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, अगरबत्तीको धुँवा चुरोटको..
डोल्पामा टाइफाइड नियन्त्रण बाहिर : बिरामी बढ्दै, औषधि घट्दै
डोल्पा, २६ असार डोल्पामा एक साताअघि शुरु भएको टाइफाइडको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा बिरामी चाप बड्न थालेपछि टाइफाइड नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । बिरामीको चाप बडेपछि १५ श्ययाको जिल्ला अस्पतालमा २५ जना बिरामीले उपचार गराइरहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै २१ जना बिरामीले बेडमै उपचार गराइरहेका थिए । दैनिक उपचार गराउन आएका चारदेखि पाँच जना..
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा योग्य उपाध्यक्ष नल्याए आन्दोलनमा उत्रिन्छाैं : डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं, २६ असार । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा योग्य व्यक्ति ल्याउन माग गरेका छन्। उनले उपाध्यक्षका लागि अहिले गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका हुन्। डा. केसीले आज त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया नरोके कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। 'सरकारले नियुक्ति..
टाउको दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस !
एजेन्सी, २५ असार हामी मध्य धेरैले टाउको दुखाई कम गर्न बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका औषधीहरु प्रयोग गर्ने गछौं । तर हामीले हाम्रो भान्सामा पाइने सामग्रीको प्रयोग गरी घरेलु तरीकाले पनि यसको उपचार गर्न सक्छौं । यस्ता सामग्रीको प्रयोग गरि हामीले सजिलै टाउको दुखाईबाट मुक्ति पाउन सक्छौं । ती उपायहरु निम्न छन् – टाउको दुखाइका लागि ल्वाङ र नुनको मिश्रण एकदमै फाइदाजनक हुने..
Results 1452: You are at page 22 of 49